Ukubaluleka kokuthengisa kunye noyilo lwegraphic kwiinkampani | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuthengisa kunye noyilo lwegraphic kwiinkampani
Ukusetyenziswa okanye hayi kwe Iindlela zokuthengisa kunye noyilo lwegraphic kumashishini amancinci naphakathi ayiseyonto yokhetho, kodwa a Ukunyanzeliswa kwemarike. Ukuba ucinga ukuba xa usakha ishishini kufuneka ukhathazeke kuphela ngendlela yokuseka umbutho wakho, sele ungaqiniseka ukuba oku yinxalenye yale nkqubo.
Ngokutsho kwesifundo, ukudalwa kwe Iziqalo ezili-1 eSpain kwisiqingatha sokuqala sonyaka, irekhodi inani ukusukela ekuqaleni kuka-2010 kwaye yile ukwanda ngokusesikweni kweshishini eSpeyin yazisa ulwando ngokuthe ngcembe. Ngamanye amagama, kwiminyaka esixhenxe ukuvulwa kweenkampani ezintsha kukhule ngaphezulu kwesiqingatha, ukusuka kumashumi amane eepesenti ngaphezulu kowama-2010 ukuya kumashumi asibhozo eepesenti kuvavanyo lokugqibela. Kodwa ngeshishini elitsha kuza imiceli mngeni kunye nemibuzo malunga nombutho, umlinganiso, isiseko sabathengi, ubudlelwane, ukuhlawula, nokunye okuninzi.
Ukuthengisa kunye noyilo loyilo
Ukuqala ishishini kubalulekile ukuba wamkele isicwangciso-qhinga sentengiso yedijithali engasebenzi kuphela kwisiza kwaye kukuba ngokukaFernando Rosolem, umphathi ziiNkonzo zeNtengiso zamava kaSerasaIsicwangciso sokwenyani kufuneka senziwe esinokuphunyezwa ngezixhobo ezikhoyo. Uthi amathuba emisebenzi e ukuthengisa kunye noyilo lwegraphic Azinasiphelo kwaye zivumela iinkampani, nokuba zinotyalo-mali oluncinci, ukuba zikwazi ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano nabo bakhuphisana nabo baphambili kwaye babe neziphumo ezimangalisayo.
Iingcali kwiNkonzo yokuThengisa yamava eSerasa zicebisa ezinye zeendlela ekufuneka uzisebenzisile ukuba ufuna ukwandisa ishishini lakho:
Into yokuqala ekufuneka igcinwe engqondweni yile ntlangano, oku kubalulekile ukufumana iinjongo zakho ngaphambi kokulandela isicwangciso sobuchule kwaye kubalulekile ukwazi ukuba ufuna ukufezekisa ntoni (ngokwasezimalini, injongo nokumaukubanakho ukunyusa isicwangciso seqhinga. Amanye amanqaku ekufuneka uyazi ukutshintsha iinjongo zakho zibandakanya: iirisithi zoku-odola, inkonzo yabathengi kunye nokuhanjiswa, ukubiza imali, ukunika ingxelo, ukuthengisa okwandileyo, i-NBO, ukujongana okuhle nabathengi abakhoyo, kunye nokulindela abathengi abatsha.
Kufuneka wenze njalo uphonononge ulwazi osele unalo, irekhodi lomthengi okanye ithemba asilogama nje nedilesi kwaye esi sisiqalo kuthotho lolwazi olongezelelekileyo olunokuphucula ubudlelwane bakho kunye nokunceda unxibelelane nabaxhasi ngokufanelekileyo.
Khumbula ukuba wonke umntu ukhetha unxibelelwano lomntu, obizwa ngegama okanye isiteketiso kunye nokufumana ulwazi oluthile.
Kuya kufuneka ukhumbule i Dibana kunye necandelo lesiseko sabathengi, le yenye yeemfihlo zokwazi abathengi bakho kunye nokufikelela kubo ngokufanelekileyo. Ungasebenzisa ulwazi lwangaphandle ukwenza fumana ulwazi olutsha kubathengi.
Enye ingcebiso yile Yahlula abathengi bakho kwiziseko ezithathu: Abathengi abathembekileyo (bakunika inzuzo enkulu ephakathi), abathengi maxa wambi (abazibophelelanga, kodwa banethuba lokwenza imali) kwaye abathengi abangasebenziyo (Banokufikelela kumthengi omdala).
Kuya kufuneka ukhangele abathengi abatsha, ngoku sele uchonge ifayile ye- Iithagethi zabaphulaphuli ekujoliswe kuboKuya kufuneka ufumane abathengi abatsha ukuze wandise isiseko sokusebenza kunye nokuthintela ukuthengisa ekumiseni. Kuyimfuneko ukuba unolu lwazi kumbutho wakho ukuze fumana umsebenzi ngexesha elifanelekileyo. Kubaluleke kakhulu ukunciphisa iindleko ngokukhokelela kwiphulo lakho lokukhangela ubume kwiprofayili echanekileyo, kufuneka sikhethe abantu abafanelekileyo ukunqanda ukuchitha iimbumbulu, kuba sihlala kwindawo yentengiso enokhuphiswano olukhulu.
Kufuneka dibana nabathengi bakho Esi sisiqinisekiso sokuba uya kuziva usekhaya kunye nomthengi. Kulo mjikelo kukho imiceli mngeni: umbutho, iindlela zonxibelelwano kunye nokulungiswa kwedatha ukongeza kubudlelwane babathengi kwaye inqanaba ngalinye lomjikelo wobomi libonisa amathuba okusetyenziswa kwemigaqo yobudlelwane njengokufumana, ukwenza kusebenze, ukuzibophelela, ukuvuselela kunye nokuguqula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuthengisa kunye noyilo lwegraphic kwiinkampani
UGabriel Jimenez sitsho
Zonke ezi zicwangciso zisisiseko seenkampani ezintsha namhlanje, ukungazihoyi kukuchitha isixhobo esifanelekileyo ukuzenza ukuba waziwe kwaye ufumane abathengi abanokubakho.
Phendula uGabriel Jimenez
Iindlela zokudibanisa: ungafunda njani ukuzisebenzisa ngokuchanekileyo
Funda ukwenza i-mockup ngophawu lwakho